Lionel Messi oo si cad u sheegay inuu ku fikiray ka tagista Barcelona & Sababta dhabta aheyd ee ka dambeysay – Gool FM
(Barcelona) 09 Okt 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa shaaca ka qaaday inuu ku fikiray inuu ka tago kooxda reer Catalonia xilli hore.
Messi ayaa wareysi uu siiyay “Catalunya Ràdio” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay inuu ku dhawaaday ka tagista kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Waqti adag ayaan ku jiray sanadihii 2012, 2013 iyo 2014, sababa la xiriira dhibaatooyinka canshuuraha, waxay aheyd xaalad nagu adag iyo qoyskeyga”.
“Runtii dadka way garan waayeen waxa anniga igu dhacaya iyo waxa la sheegay, saxaafadana doorkeeda ayeey ka ciyaartay arrintaan”.
“Waxaan u malaynayaa inaan ahay qofkii ugu horreeyay ee kiis canshuur lunsi ah laga baaro, waana sababta ay xaalada iigu adkaatay aniga iyo qosykeyga, kaddib waxaa laga baaray shaqsiyaad kale, waxaana loo sheegay: (ama inaad bixisaan ama waxaa idinku dhici doono wixii ku dhacay Messi)”.
“Carruurteyda aad ayeey u yaraayeen xilligaas, sidaas darteed waxaan runtii ku fikiray inaan baxo, arrinta kuma xirneyn kaliya inaan ka tago Barcelona, balse guud ahaan Spain oo dhan, maxaa yeelay waxaan dareemay in si xun la iila dhaqmay, mana dooneynin inaan halkan sii joogo”.
“Waxaa jiray albaabo badan ee ii furanaa xilligaas oo i hor yiilay, laakiin ma jirin wax rasmi ah, maxaa yeelay qof walba wuu ogaa in hamigeygu uu ahaa inaan halkaan sii joogo”.